मन्त्री पनि कति लोभी ? किसान कोटामा मन्त्रीकाे भ्रमण - RatoKalam.com is No one news portal.
मन्त्री पनि कति लोभी ? किसान कोटामा मन्त्रीकाे भ्रमण
काठमाडौं : चिया किसान तथा चिया व्यवासायीहरूको कोटामा कृषि विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल शनिबार दिउँसो चीन जाँदै छन्। मन्त्री खनाल २० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन जान लागेका हुन्। चीनको सिचुवान प्रान्तको इविनी नगरपालिकामा मार्च १७ देखि २१ सम्म हुने ‘फर्ड अनुअल टी एक्सपो’ कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्रीसहितको टोली चीन जान लागेको हो।
विदेश भ्रमणको अवसर आएमा मन्त्री मात्र नभई कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले पनि किसान र कर्मचारीको कोटामा चासो राख्छिन्। राज्यमन्त्री चौधरी पछिल्लो पाँच महिनामा दुईपटक श्रीमान्लाई लिएर विदेश भ्रमण गइसकेकी छन्। पछिल्लो पटक उनी माघमा ५ मा इटलीको राजधानी रोम गएकी थिइन्। उनीसँगै उनका श्रीमान सन्तोष थारू पनि रोम पुगेका थिए। मन्त्रीहरू आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्न थालेपछि सरकारले केही महिनाअघि निर्देशिका ल्याई भ्रमणमा कडाइ गरेको थियो। तर निर्देशिका जारी भएपछि पनि मन्त्रीहरूको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकिएको छैन। पछिल्लो तीन महिनामा मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा मात्रै राज्यकोषको झन्डै दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। नागरिकबाट ।